Laptop ama PC (kombiyuutar): faa'iidooyinka iyo khasaaraha | TeraNews.net
Laptop ama PC (kombiyuutar): faa'iidooyinka iyo khasaaraha
qoraaga Tera news La daabacay 13.03.2019
Xullo ayaad leedahay: laptop ama kombiyuutar? Waqti ha luminin - ka dib markaad aqriso maqaalka, waxaad isla markiiba go’aansan doontaa waxa aad iibsaneyso.
Laptop ama PC: gacan labaad
Macnaha guud, qalabka la adeegsaday ama mid cusub, oo ka socda dukaanka - dooro iibsadaha. Kala duwanaanshaha qiimaha. Oo muhiim ah - laptop ama kombiyuutar BU ah ayaa ku kici doona 2-3 jeer kayar midka cusub. Laakiin waxaa jira suuragalnimada 50% ee guuldarreysiga. Maqnaanshaha damaanad iibiyaha wuxuu u horseedi doonaa hagaajinta qalabka kharashkiisa. Sidaa darteed, dheefaha waxay umuuqdaan kuwo ba'an.
Dhaqdhaqaaqa. Cabbir yar iyo culeys, jiritaanka shaashad, ku hadla codbaahiye codbaahiye iyo qalabka wax lagu qoro (taabashada, furaha), awooda iskeed uheleyso iyo marin u helida shabakadaha wireless. Laptop-ka wuxuu ku habboon yahay dadka ganacsatada ah oo si joogto ah ugu dhex guura guriga iyo shaqada. Baarkinka, kafateeriyada, xafiiska, safarada ganacsiga - kombiyuutarka wareega ayaa noqon doona kaaliyaha lama huraanka ah. Guriga dhexdiisa, kumbuyuutarka kumbuyuutarka kuma fadhiyo miiska. Maqnaanshaha buuxa ee fiilooyinka ayaa kuu oggolaanaya inaad ku wareejiso qalabka guriga. Waaliddiinta, laptop-ka ayaa ah xalka ugufiican.
Waxqabadka. Laptopsyada waxay la yimaadaan darawalada iyo softiweerka, iyo badiyaa la socda nidaamka hawlgalka Windows. Riix batoon - iyo wax kasta oo aad ugu baahan tahay desktop-ka. Jiritaanka USB iyo soosaarka fiidiyowga, wuxuu dheereyaa waxqabadka aaladda moobiilka. Way fududahay inaad ku xidho kormeere ama TV, keyboard dibadda, jiirka, daabacaha, scanner, fakis. Laptop-ka, hadaad rabto, wuxuu isu rogaa router rogogi kara internetka.
Iska caabin adag oo aan adkeyn. Laptop-ka way fududahay in la waxyeelleeyo: daadinta, burburin, ku shub cabitaannada dareeraha ah. Batteriga, oo si aan munaasib ahayn loo isticmaalo, wuxuu xirtaa sanadka oo dhan, wuxuu lumiyaa awood. Nidaamka qaboojinta ee-ku-saleysan gudaha ma ahan mid kaamil ah - ka dib marka la soo aruuriyo boodhka iyada oo loo marayo daloolka hawo-mareenka, laptop-ku wuu ku kululaadaa, xitaa wuu gubi karaa.
La qabsi la'aanta hoose ee casriyeynta. Gasho drive smart smart ah oo ku dar RAM - taasi waa sida IT loogula taliyay in la dedejiyo laptop. Laakiin kadib sannadihii 3-4 ee qalliinka, su’aalo ayaa u soo ifbaxaya processor-ka oo wata kaarka fiidiyowga, oo si adag loogu xajisto kombuyuutarka loo yaqaan 'motherboard of the mobile'. Kaliya bedelida laptop-ka haddii kale waxqabadka lama horumarin karo.
Kombiyuutarrada shaqsiyeed (PCs): faa'iidooyinka
Naqshadeyn macquul ah oo macquul ah. Kombiyuutarka si fudud ayaa loogula jaan qaada howlaha qofka isticmaala. Ilaa doorashada doorashada barnaamijyada caanka ah ama ciyaaraha. Qaybaha isbeheysiga ee kumbuyuutarrada ayaa isweydaarsan kara, sidaa darteed arrinta casriyeynta ayaa sidoo kale la baabi'inayaa. Ma ubaahantahay inaad meel dhigato miis dushaada ah - fadlan hoy micro. Kumanaan kala duwanaansho ah.
Adeegsiga Fudud. Ku shaqeynta, ciyaarista ama ka dhex-gelinta internetka ee kursi jilicsan oo hor fadhiya kormeere weyn ayaa caddeyn toos ah u ah raaxada PC. Kombiyuutarka aad ayuu u shaqeynayaa marka loo eego isku xiridda aaladaha warbaahinta badan. Boodh ama kuleyl aad u badan - figraddan ayaa ka maqan, iyada oo si nadiif ah loo nadiifinayo boodhka PC (1 mar sanadkii ama labo).
Kombiyuutarrada shaqsiyeed: faa'iido darrooyinka
Bulkiness. Kormeer, qaybta nidaamka - haddii ay dhacdo kala go ', waxaad u baahnaan doontaa inaad wacdo takhasusle guriga ah. Haddii kale, waxaa jiri doona dhibaatooyin laxiriirayaasha markii dib loo xirmayo. Sidoo kale waxaad ubaahantahay inaad ilaalisid goobta shaqada - miis, kursi gacmeed, jiritaanka koronto korantada iyo galida fiilada ee ku xirida internetka.
La'aanta isgaarsiinta wireless. Si aad ugu xirato shabakad Wi-Fi ama 3 / 4G, waxaad u baahan doontaa inaad iibsato qalabka ku habboon. Isku soo wada duuboo, kumbuyuutar ayaa adeegsada isticmaale meheradda.
Muhiimadda: laptop ama PC (kumbuyuutar)?
Ciyaaraha - Dhab ahaan Kombiyuutar shaqsiyeed. Way fududahay in la cusbooneysiyo, ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo ku saabsan kuleylka. Haa, oo fadhiiso saacadaha 4-5, jabinta cadawga ama difaacida Boqortooyada ayaa aad uga haboon in la isticmaalo kombiyuutarka gacanta.
Ka doorbid dhaqdhaqaaqa - laptop kaliya. Waxay ka shaqeeyaan guriga - waxay xireen daboolka waxayna u guureen kafateer ama xafiis. Ha iloobin inaad kormeerto lacagta batteriga. Waxaan kugula talineynaa inaad iibsato xirmooyinka 2-3: ee guriga, xafiiska iyo ku dallacidda gaariga.
Raadi kombuyuutar loogu talagalay waalidiinta - laptop. Dhamaan isgaarsiinta, dhaqdhaqaaqa, fududeynta howlgalka. Soo iibso jiirka si aad ugu habboon tahay, maaddaama dadka da'da ah aysan lahayn wax saaxiibtinnimo ah taabashada taabashada.
Caruurta waxaa fiican inaad iibsato kumbuyuutar shaqsiyeed. Suuragalnimada casriyeynta, iyo gelitaanka qaybaha qaybaha nidaamka ayaa kordhin doona nolosha qalabka.
Asus Chromebook Flip CM300 (laptop + kiniin) wadada
Xulashada ASUS Sky 2 Ryzen 5000 Laptop-ka ciyaaraha
Laptops oo wata kaararka sawirada ee GeForce RTX 30xx - Asus vs MSI